Googlebot ကို ပိတ်ဆို့ထားမိပါသလား − Did Your Website Block Googlebot?
Submitted by everlearner on Sat, 12/10/2011 - 11:45
Webmaster တစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့ website တွေကို Google ရဲ့ Search Engine မှာ ရှာတွေ့စေဖို့အတွက် နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကြိုးစားရလေ့ ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို လုပ်တဲ့အခါ မှန်တာတွေရှိသလို မှားတာတွေလည်း ရှိနေတတ်ပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် ကိုယ့်ဆိုက်ရဲ့ Ranking တက်လာနိုင်ပါတယ်။ အလားတူပဲ မမှန်ကန်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေကြောင့်လည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကို အင်တာနက်မှာ ရှာဖွေရ ခက်လာတတ်ပါတယ်။
အခု ဝေမျှချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေက Google က Webmaster Trends Analyst ဖြစ်တဲ့ Pierre Far ရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးလေး ဖြစ်ပါတယ်။ Webmaster Trends Analyst တစ်ယာက်အနေနဲ့ သူနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေတဲ့ Webmaster တွေရဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ ပြဿနာတွေနဲ့ ဖြေရှင်းနည်းတွေကို အကြံပြု ဖြေရှင်းပေးထားတဲ့ ဆောင်းပါး ဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာ Webmaster, Web Developer ညီအကို မောင်နှမများ အတွက်လည်း တစ်နည်းနည်းနဲ့ အထောက်အပံ့ ရမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
Read more about Googlebot ကို ပိတ်ဆို့ထားမိပါသလား − Did Your Website Block Googlebot?
Knowledge & Experiences @ Google DevFests 2011 Singapore - Part - 1 - The Google Plus
Submitted by everlearner on Sun, 11/13/2011 - 05:47
Google ပေးနေတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေက အသစ် ဖန်တီးမှုတွေနဲ့ အမြဲတမ်း တိုးတက်နေသလို API တွေ အသစ်ထွက်တိုင်းလည်း သက်ဆိုင်ရာ နေရာ ဒေသတွေ အလိုက် Developer Conference တွေ လုပ်ပြီး သူတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Feature တွေကို မိတ်ဆက်ပေးလေ့ ရှိပါတယ်။
အခု ဝေမျှမယ့် အကြောင်းတွေက ဒီနေ့ (12 November 2011) တက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Grand Hyatt Hotel, 10 Scotts Road, Singapore မှာလုပ်တဲ့ Google DevFests 2011 Singapore event မှာ သိလိုက်ရတဲ့ နည်းပညာတွေနဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မတက်ဖြစ်တဲ့ ညီအကို မောင်နှမတွေနဲ့ အဝေးက မြန်မာ Developer ညီအကို၊ မောင်နှမ များအတွက်၊ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ ပရောဂျက်တွေနဲ့ နောက်လုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ ဗဟုသုတ တစ်ခုခု ရစေဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။
Read more about Knowledge & Experiences @ Google DevFests 2011 Singapore - Part - 1 - The Google Plus
Troubleshooting Web Development Problems − Part Three - Code Diving, Asking Questions and Finding Error Locations
Submitted by everlearner on Wed, 10/26/2011 - 14:08
ပြဿနာ တစ်ခုရဲ့ အဖြေအတွက် သူများကို မေးတော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ပြဿနာက ဘာလဲ ဆိုတာကို ကိုယ်တိုင် သေသေချာချာ သိဖို့ အထူး အရေးကြီးပါတယ်။ အဆိုးဆုံး ပြဿနာတွေထဲက တစ်ခုကတော့ "ကိုယ်ဘာကို မသိတာလဲ ဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာ သေသေချာချာ မသိတာပါပဲ"။
Web developer တွေရင်ဆိုင်ရလေ့ ရှိတဲ့ နိစ္စဓူဝ အခက်အခဲများနဲ့ ပြဿနာများ၊ အဲဒီ အခက်အခဲများကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရာမှာ အထောက်အကူ ဖြစ်စေတဲ့ နည်းလမ်းများကို အပိုင်းတစ်ဖြစ်တဲ့ "Troubleshooting Web Development Problems − Part One - Thinking, Reading, Validation, Styling and Caching" နဲ့ Part Two - Read Me Files, Search Engines and Database Problems မှာ ဝေမျှခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီအပိုင်းကတော့ နောက်ဆုံးအပိုင်းပါ။
Read more about Troubleshooting Web Development Problems − Part Three - Code Diving, Asking Questions and Finding Error Locations
Troubleshooting Web Development Problems − Part Two - Read Me Files, Search Engines and Database Problems
Submitted by everlearner on Sat, 10/22/2011 - 06:44
တကယ်တော့ အခက်အခဲတွေ၊ ပြဿနာတွေဟာ ကြောက်စရာ၊ လန့်စရာတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ အခက်အခဲတွေဟာ မြင်တတ်ရင်၊ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတတ်ရင် ငွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အောင်မြင်မှုလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လောကမှာ အောင်မြင်နေတဲ့ လူတိုင်း၊ လုပ်ငန်းရှင်တိုင်း၊ စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်းတိုင်းကို သေသေချာချာ လေ့လာကြည့်ရင် လူတွေရဲ့ အခက်အခဲနဲ့ ပြဿနာတွေကို နည်းလမ်း အမျိုးမျိုးနဲ့ ဖြေရှင်းပေးရင်း အောင်မြင်နေတာ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ လူတိုင်းမှာ ပြဿနာတွေ ရှိပါတယ်။ လူအများစု ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်သူ၊ ဒါမှမဟုတ် နည်းပညာတစ်ရပ်ဟာ အောင်မြင်မှုရမှာပါပဲ။
Web developer တွေရင်ဆိုင်ရလေ့ ရှိတဲ့ နိစ္စဓူဝ အခက်အခဲများနဲ့ ပြဿနာများ၊ အဲဒီ အခက်အခဲများကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရာမှာ အထောက်အကူ ဖြစ်စေတဲ့ နည်းလမ်းများကို အပိုင်းတစ်ဖြစ်တဲ့ "Troubleshooting Web Development Problems − Part One - Thinking, Reading, Validation, Styling and Caching" မှာ ပထမဆုံး ဝေမျှခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီအပိုင်းမှာတော့ ကျန်တဲ့ အချက်တွေကို ဆက်ရေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Read more about Troubleshooting Web Development Problems − Part Two - Read Me Files, Search Engines and Database Problems
Troubleshooting Web Development Problems − Part One - Thinking, Reading, Validation, Styling and Caching
Submitted by everlearner on Sat, 10/15/2011 - 05:54
Web developer တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖန်တီးနေရင်း ပြဿနာ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့ရတတ်တာဟာ သဘာဝပါ။ ဒါဟာ လူတိုင်းတွေ့ရတဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ကြုံရလို့ စိတ်မပျက်ပါနဲ့။ ကိုယ့်လိုပဲ သူများတွေလည်း အခက်အခဲတွေကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရတယ် ဆိုတာ နှလုံးသွင်း လက်ခံထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်မေးမိတဲ့ မေးခွန်း၊ ကိုယ်ရှာနေတဲ့ အဖြေကို ကိုယ့်လိုပဲ တခြားသူတွေလည်း အကြိမ်ပေါင်းများစွာ မေးနေ၊ ရှာနေမယ်ဆိုတာ သိထားသင့်ပါတယ်။
အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အချက်တွေဟာ Drupal developer တစ်ယောက် ကြုံရတတ်တဲ့ ပြဿနာတွေကို အခြေခံပြီး ရေးထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် တခြားသော Web Developer များအတွက်လည်း အသုံးဝင်မှာ သေချာပါတယ်။
Read more about Troubleshooting Web Development Problems − Part One - Thinking, Reading, Validation, Styling and Caching
အမှန်တကယ် အသုံးပြုသူ (End User) များနှင့် စတင် အလုပ်လုပ်ခြင်း
Submitted by everlearner on Sun, 09/25/2011 - 06:03
Programmer / Developer များအတွက် ရေးလက်စ၊ တည်ဆောက်လက်စ ပရောဂျက်တစ်ခုထဲက Code တွေကို ပြင်ဆင်လိုက်ရတာက လျင်မြန်လွယ်ကူတဲ့ အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အစအဆုံး ပြန်ပြင်ရတာလောက် မခက်ပါဘူး။ End user များအတွက် သူတို့ရဲ့ ပရောဂျက်မှာ လိုအပ်တာနဲ့ မလိုအပ်တာတွေကို စောစောစီးစီး သိရှိ ပြင်ဆင် ခွင့်ရတာကလည်း သူတို့ကို စိတ်ကြေနပ်မှု အပြည့်အဝ ရစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အားလုံး အဆင်ပြေ၊ ပျော်ရွှင်စေဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ပရောဂျက် မန်နေဂျာများ အနေနဲ့ End user များနဲ့ Programmer, Developer များကို တတ်နိုင်သမျှ စောစောစီးစီး ပေါင်းစည်း ညှိနှိုင်းပေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Read more about အမှန်တကယ် အသုံးပြုသူ (End User) များနှင့် စတင် အလုပ်လုပ်ခြင်း
Submitted by everlearner on Tue, 08/30/2011 - 17:12
Website တစ်ခု တည်ဆောက်တဲ့အခါ အစိတ်အပိုင်းများစွာကို ပေါင်းစပ် ဖွဲ့စည်း အသုံးပြုကြရ ပါတယ်။ အချို့ အစိတ်အပိုင်းတွေက တစ်ခါ ထည့်သုံးထားလိုက်တာနဲ့ ထပ်ပြောင်းစရာ မလိုတော့တဲ့ Static Files တွေ ဖြစ်ပြီး၊ တချို့ အပိုင်းတွေကတော့ လိုအပ်သလို အမြဲ ပြောင်းလဲနေရတဲ့ Dynamic Files တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ Web Developer, Web Master တစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်တည်ဆောက်နေတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ပါရှိတဲ့ Static နဲ့ Dynamic အစိတ်အပိုင်းတွေကို တစ်နေရာတည်းမှာ မထားဘဲ နေရာခွဲခြား သိမ်းဆည်း အသုံးပြုနိုင်မယ် ဆိုရင် ဆိုက်ကို ဝင်ကြည့်တဲ့ သူတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ဆိုက်ကို လျင်မြန်စွာ မြင်တွေ့ကြရပါလိမ့်မယ်။
Read more about Splitting Components of the Websites Across Different Domains to Speed up Our Websites
ရိုးစင်းမှု၏ အလှအပ Beauty of Simplicity
Submitted by everlearner on Sun, 07/24/2011 - 12:25
အလှအပဆိုတာ ရိုးစင်းမှုကနေ ပေါက်ဖွားလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အလှအပကို ရိုးစင်းမှုထဲမှာပဲ ရှာဖွေ တွေ့ရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Software Engineer, Developer, Programmer များအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရေးလိုက်တဲ့ Code တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သတိထားစရာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အဲဒီအချက်များထဲမှာ − ဖတ်ရှုရန် လွယ်ကူခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် လွယ်ကူခြင်း၊ လျင်မြန်စွာ တည်ဆောက်နိုင်မှု၊ လှပသပ်ရပ်မှု − စတဲ့ အချက်များလဲ ပါရှိပါတယ်။ ဒီအရည်အသွေးများ အားလုံးအတွက် အခြေခံ အကျဆုံး လိုအပ်ချက်ကတော့ "ရိုးစင်းမှု (Simplicity)" ဖြစ်ပါတယ်။
Read more about ရိုးစင်းမှု၏ အလှအပ Beauty of Simplicity
Submitted by everlearner on Sat, 07/16/2011 - 05:19
Gmail ကိုသုံးနေတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ Inbox ထဲကို နေ့စဉ် ရောက်လာတဲ့ အကြောင်းအရာမျိုးစုံကို ပိုပြီးထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုကို Google က ထပ်မံ မိတ်ဆက်ပေးလိုက် ပါတယ်။ တကယ်တော့ Gmail မှာ Inbox ကို အသုံးချနိုင်တဲ့ နည်းတွေ အများကြီး ရှိနေပြီးသားပါ။ တချို့က ဝင်လာတဲ့ အီးမေးလ်အားလုံး (Everything) ကို ဖတ်ပါတယ်။ တချို့ကတော့ စာပြန်ဖို့ သို့မဟုတ် တစ်ခုခု ဆက်လုပ်ဖို့လိုတဲ့ အီးမေးလ်တွေကို ကြယ်လေးတွေနဲ့ မှတ်သားတတ်ကြပါတယ် (Marking with Stars)။ တချို့ကတော့ အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ကျန်တဲ့ မေးလ်တွေနဲ့ အလိုအလျောက် ခွဲထုတ်ပေးတဲ့၊ မနှစ်ကတည်းက စပြီးသုံးလို့
Read more about Gmail New Inbox Styles for Easy Email Categorization and Management
Read more about Google+ Privacy Guide - 1 - Circles, Blocking and People Suggestions